HI! I'M Aung Kyaw Soe
Professional In Facebook Specialist. Business Advisory. Facebook Boost and Training Services. Website Service. Security Service.
IT / ICT / Help Support and Trainer( Founder at OSC-Myanmar. )
Me Aung Kyaw Soe မှာ Website, Domain, Facebook Boost, Social Account Security ပိုင်းဆိုင်ရာများကို ဝန်ဆောင်မှုပေးခဲ့ပြီး သင်တန်းများလည်းပို့ချသင်ကြားခဲ့သည်မှာ အချိန်တစ်ခုကြာမြင့်ခဲ့ပါပြီ။ လူမှုကွန်ယက် ဝဘ်ဆိုဒ်များနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်များကို OSC-Myanmar Facebook Page မှလည်းကောင်း၊ ပြင်ပမှလည်းကောင်း မျှဝေကူညီပေးနေသူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။
Facebook နှင့်ပတ်သက်သည့် Boost ပြုလုပ်ပေးခြင်းနှင့် သင်တန်းပေးခြင်း၊ Page Settings များပြုလုပ်ပေးခြင်းနှင့် ကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုနိုင်ရင်သင်ခြားပေးခြင်းများ၊ အဆင့်မြင့်မြင့်လုပ်ငန်းသုံး ကိုယ်ရေးကိုယ်တာသုံး Website များရေးဆွဲပေးခြင်း၊ Inexpensive Trainings Service တန်ဖိုးနည်းသင်တန်းများပေးခြင်း၊ ကိုယ်ပိုင် Blog များ Website များကို Domain Name တွဲပေးခြင်း။
Website ပိုင်းဆိုင်ရာ(အသုံးပြုနည်း)များ သင်ကြားပြသပေးခြင်း၊ Website ရှိပြီး Web Mail မရှိသေးလျှင်ပြုလုပ်ပေးခြင်း၊ လူသုံးများသော Social Account Security များမြှင့်ပေးခြင်း နှင့် Security ပိုင်းဆိုင်ရာသင်တန်းများပို့ချပေးခြင်းတွေကို စျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့် ပြုလုပ်ပေးလျှက်ရှိပါသည်။ ဆက်သွယ်ရန် - 09421157911, 09794426154, 09253351244
Facebook Boost and Training Services
Social Account Security
Inexpensive Trainings Service
Facebook Boost ပြုလုပ်ပေးခြင်း၊ Boost ပြုလုပ်နည်းသင်တန်းပေးခြင်း၊ Boost Error များကိုဖြေရှင်းပေးခြင်းများ။
Page Settings များပြုလုပ်ပေးခြင်း၊ Page များကိုကိုင်တွယ်ပေးခြင်း၊ Content များရေးပေးခြင်း၊ Page ကိုကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုနည်းသင်ကြားပေးခြင်းများ။
Social account ဆိုင်ရာ Security Service များပြုလုပ်ပေးခြင်း၊ Security knowledge sharing ပြုလုပ်ပေးခြင်းများ။
စျေးနှုန်းသက်သာစွာဖြင့် လုပ်ငန်းသုံး၊ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာသုံး၊ Website များကိုရေးဆွဲပေးခြင်းနှင့် အသုံးပြုနည်း သင်တန်းပေးခြင်းများ။
Social Media များနှင့်ပတ်သက်သည်များ၊ Cyber Crime များနဲ့ပတ်သက်သည်များကိုကူညီပေးခြင်း၊ အကြံဉာဏ်ပေးခြင်းများ။
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များအတွက် လုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးအကြံဉာဏ်ပေးခြင်းများ၊ နည်းပညာပိုင်း၊ နည်းစနစ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြံပေးမှုများ။
My Knowledge Sharing
2007 - Current Years.
2007 ခုနှစ်မှစတင်ကာ Social Media Platforms မျိုးစုံပေါ်တွင်ကျင်လည်ခဲ့ပြီး ယနေ့အထိလည်း သုံးစွဲလျှက်ရှိပါသည်။
2009 - Current Years.
2009 မှစတင်ကာ ကိုယ်ပိုင် Website များတည်ထောင်ခဲ့သလို Personal Used, Business Used, ဝဘ်ဆိုက်များရေးဆွဲပေးသည့် Service များကိုယနေ့အထိပေးလျှက်ရှိပါသည်။
2014 - Current Years.
2014 မှစတင်ကာ Knowledge Sharing များကို TV Programs များ၊ Institute များ၊ Agency များ၊ Seminar များ၊ တွင် အလျဉ်းသင့်သလို Sharing ပြုလုပ်ပေးလျှက်ရှိပါသည်။
What is Testimonials
ပညာကိုလည်း လေးစားမိတယ်။ ဝန်ဆောင်မှုကလည်း Excellent စိတ်ရှည်မှုကတော့ ပြောစရာမလို၊ အားလုံး အဆင်ပြေ။ That's why love you all.
Tin Htat Aung Client
ကျေးဇူးအထူးပါ OSC-Myanmar ရေ... ဝန်ဆောင်မှုပိုင်း၊ ဖော်ရွေမှုပိုင်း၊ နည်းပညာပိုင်း၊ အစစအရာရာအကုန်လုံးကိုလေးစားအားကျလျက်ပါဗျို့... တန်ဖိုးထားလျက်ပါ။ ဒီထက်မက အောင်မြင်မှုများစွာပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ။ ဆထက်မက နည်းပညာပိုင်းဖြင့် လောကအကျိုးပိုပီး သယ်ပိုးဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေဗျာ။ Admin တွေလည်း ကျန်းမာ ချမ်းသာပါစေဗျို့။ (စိုးထက်)
Soe Htet ရွှေငါးမင်း - Offset and Quality Printing House
Solutions for degital marketers. Their services are very helpful for people who startup their new businesses through social media.
Khai Myat Mon Studied Taste of Script Writing at MMDC Myanmar
အကောင့် Hack ပြီး ​ငွေညစ်​ခံရလို့ ကိုယ်​့ Online Shop Page ပါ ပျောက်​​တော့မယ်​့အ​ခြေအ​နေ​ရောက်​​နေတုန်​းက အမှန်​အကန်​ ကူညီခဲ့တဲ့အကိုပါ။ ၂၄ နာရီ​တောင်​မ​ကျော်​ပါဘူး Account ​ရော၊ Page ​ရော ပြန်​ရခဲ့ပါတယ်။​ တကယ်​အရမ်​း​ကျေးဇူးတင်​ခဲ့ပါတယ်။​ ပိုက်​ဆံမယူလို့ လက်​​ဆောင်​ပေးမယ်​ဆိုတာ​တောင်​လက်​မခံခဲ့တဲ့သူပါ။ တကယ်​ပါ ​နောက်​လာ hack တိုင်​းလဲမကျ​အောင်​ Security ​တွေ အဆင်​့ဆင်​့ခံပြီး ​သေချာရှင်​းပြ​ပေးခဲ့သူမို့ ပညာကို​လေးစားပါတယ်။
Zin Wint Phyu Works at Unilever
စိတ်ရှည်ချက်ကတော့လက်ဖျားခါတယ်။ သဘောလဲအရမ်းကောင်းတယ်။ အကောင့်ကိုဆုံးရှံူးရပီလို့ထင်ထားခဲ့တာOSC-Myanmar ကြောင့်ပြန်ရခဲ့ပါတယ်။ ကျေးဇူးအရမ်းတင်ပါတယ်။ ဒီထက်မကအောင်မြင်ပြီးလူသားအားလုံးကိုအကျိုးပြုနိုင်ပါစေဗျာ။
Win Ko Ko Naing(윈코코님) Work at South Korea - Jeju City
အရမ်းကိုတော်တဲ့အကိုပါ လစ်ပြီလို့ထင်နေတဲ့အကောင့်လေးပြန်ရလို့ အရမ်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အကုန်လုံးစိတ်ရှည်လက်ရှည်နဲ့ရှင်းပြတဲ့အတွက်ရော၊ အဆင်ပြေအောင်လုပ်ပေးတဲ့အတွက်ရောကျေးဇူးပါ။
Theint Zin Mar Owner at JP Mogok Gems and Jewellery
အမြဲစိတ်ရှည်လက်ရှည်နဲ့မေးသမျှကိုဖြေကြားပေးတယ်။ Customer Care ကတော့ တော်တော်ကိုကောင်းပါတယ်။ ဒီထက်အောင်မြင်မှာပါ။
May Zin Htunn Owner at Milky Way - CCTV ,Finger Print and Surveillance System and Smart GPS
အကောင့် Log ကျသွားတာကို ပြန်ရအောင်လုပ်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ နောက်များအခက်ခဲရှိလည်းကူညီပေးပါအုန်းရှင့်။
Hsu Myat Mon Works at Myanmar Red Cross Society
တကယ်က Facebook မှာ Boost လုပ်ရတာလွယ်ပါတယ်။ Bank card လေးချိတ်ပြီး Facebook, Page manager, Ads manager, လေးတွေထဲက ကြိုက်တဲ့ဆီကနေ Page like or Post like ကို ငွေအမောက်ကို စိတ်ကြိုက်ထည့်၊ ရက်ကိုစိတ်ကြိုက်ပေးပြီး Boost လုပ်လို့ရပါတယ်။
Facebook နဲ့ Facebook business help team ကလည်း လူတိုင်းအလွယ်တကူပြုလုပ်လို့ရအောင် Easy used ဖြစ်အောင်ကိုလုပ်ပေးထားတာပါ။ ကျွန်တော်ဆို Boost ပြုလုပ်နည်းသင်တန်းပေးတဲ့အခါ ဟိုးအရင်တုန်းက အသေးစိတ် အစကနေအဆုံး Details အတိအကျသင်ပေးခဲ့ဖူးတယ်။
နံပါတ်( ၁ ) - သင်ပေးသူရော၊ သင်ယူသူရော အချိန်အများကြီးပေးရတယ်။
နံပါတ် ( ၂ ) - အများကြီး Details ကျကျ သင်ရတဲ့အတွက် သင်ယူသူသာ မှတ်ယူနိုင်စွမ်းအားနည်းတယ်ဆိုရင် သင်ချိန်ပဲ သင်ခန်းစာကိုမှတ်မိပြီး သင်တန်းပြီးသွားတာနဲ့ အကုန်ရောသွားတာ၊ မမှတ်မိတော့တာတွေဖြစ်ကုန်တယ်။
တချို့လည်း စာအုပ်နဲ့သာလိုက်မှတ်ကြတာ တကယ် ကိုယ်တိုင်ပြန်လုပ်တော့ ကိုယ်မှတ်ထားတဲ့စာအုပ်ကြီးကြည့်ပီး ဘယ်ဟာက ဘာလည်းဆိုတာကို မသိတော့တာမျိုးတွေဖြစ်သွားတတ်ကြတယ်( တော်တော်များများကိုဖြစ်ကြတာပါ )။
အခြားသင်တန်းတွေတက်တဲ့အခါမှာ သင်တန်းပြီးသွားလို့ မတတ်သေးရင် သင်တန်းကိုအစကနေပြန်တက်လေလို့ပဲအပြောခံရတာများတော့ အဆင်မပြေဖြစ်ကြတဲ့သူတွေများပါတယ်။ အဲ့လိုလူတွေအတွက် အခုနောက်ပိုင်းသင်တဲ့အခါမှာ Short to the point လေးတွေပဲသင်ပေးဖြစ်ပါတော့တယ်။ တကယ်လိုအပ်တာကလည်း အဲ့ဒီ Short to the point လေးတွေကိုအကြမ်းဖျဉ်းသိထားရင်အဆင်ပြေတာမို့ပါ။ နောက်ပြီးတော့ တခုရှိတာက ကျွန်တော့်ဆီမှာသင်တန်းစတက်လိုက်ရင် ရာသက်ပန်သင်တန်းသားအဖြစ်သတ်မှတ်ထားလို့ မသိတာရှိရင် အချိန်မရွေးပြန်လာမေးခွင့်ရှိလို့အဆင်ပြေကြတဲ့သူများပါတယ်( ဒါက ကြော်ငြာဝင်တာ )။
ကဲကဲ လေကြောရှည်နေတာရပ်ပါပြီ။ အဓိက Short to the point အနေနဲ့ပြောချင်တာက Boost လုပ်ရင်း ကိုယ်သုံးမိတဲ့ $ ငွေအမောက်ထက် အများကြီးပိုကုန်တာ၊ ကိုယ်မသုံးပဲ အကြွေးတွေအများကြီးတင်သွားတယ်ဆိုပြီးဖြစ်တဲ့သူတွေအတွက် ဒါလေးကိုပြောပြတာပါ။
ကိုယ်မသိလိုက်ပဲ ကိုယ်လုပ်လိုက်တဲ့ နောက်ကွယ်ကနေ ၂ ဆ ကုန်သွားတာမျိုးတွေ၊ ၁၀ ဆ ကနေ ၁၀ ဆ မကလောက် ကုန်သွားတာမျိုးတွေရှိပါတယ်။
1. Boost လုပ်ရင်း အမှတ်မထင် Duplicate လုပ်မိခြင်း။
အခုနောက်ပိုင်း Desktop user ထက် Mobile user တွေကပိုများလာတော့ Facebook app, Page manager app, Ads manager app, တွေထဲကနေ Boost ကို Step by step လုပ်ရင်း အမှတ်မထင် Duplicate လုပ်မိသွားကြတာများတယ်။ အဲ့လို Duplicate လုပ်မိရင် ၂ ခု ပွားသွားတဲ့အတွက် ကိုယ်က ကြော်ငြာ ၁ ခုအတွက် $10 သုံးထားတယ်ဆို သေခြာပေါက် $20 ကုန်ပြီ။ $100 သုံးထားမိရင် $200 ကုန်သွားပြီပဲ။ ဒါကြောင့် Boost လုပ်တဲ့အခါ Duplicate လုပ်မလားလာမေးတဲ့အခါ Not now ပဲလုပ်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်။
2. Per day( Daily ) နဲ့ Lifetime ကို မှားယွင်းလုပ်မိခြင်း။
တချို့ Boost သာလုပ်နေတာ ကိုယ်လုပ်လိုက်တဲ့ Boost က Per day နဲ့ လုပ်မိတာလား Lifetime နဲ့လုပ်မိတာလားဆိုတာသေခြာမသိကြတာရှိသလို၊ သေခြာမစစ်ကြတာရှိပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ Facebook ဘက်က Default date ကို အလိုလျောက်7ရက်သတ်မှတ်တာရှိသလို၊ 10 ရက်သတ်မှတ်တာလည်းရှိပါတယ်။ ကိုယ်က ရက်နဲ့ ငွေအမောက်ကိုသာသေခြာမစစ်ဘူးဆိုရင် ဥပမာ - ပုံမှန် $1 နဲ့7ရက် လုပ်တယ်ဆိုပါစို့ Per day နဲ့လုပ်ခဲ့ရင် ၇ ရက်ပြည့်တာနဲ့ $7 ပဲကုန်မယ်၊ $1 ကို Lifetime နဲ့လုပ်မိသွားရင် $ တွေ ရာနဲ့ချီပြီးကုန်သွားနိုင်ပါတယ်။
3. Post like boost နဲ့ Page like boost ကိုရောထွေးသွားတတ်ခြင်း။
ဒီခေါင်းစဉ်မြင်တာနဲ့ Post like boost နဲ့ Page like boost က မတူတာသိတယ်လေ၊ ခွဲခြားပြီးသိပါတယ်ဆိုပြီးလုပ်ကြမယ်ထင်တယ်။
Post Like နဲ့ Page Like မှာ ကွာတယ်။
ဥပမာ $10 နဲ့ ၁၀ ရက် Run ချင်တယ်ဆိုရင်...
Post Like - $10 ပဲ ငွေအမောက်မှာထား။
Page Like - $1 ပဲ ငွေအမောက်မှာထား။
အဲ့လိုသုံးမှ 10 ရက်ပြည့်တာနဲ့ $10 ပဲ ဖြတ်မှာ။
Page Like ကို $1 ပဲ ငွေအမောက်မှာထားရမှာကို $10 ဆိုပြီးထားလိုက်ရင် ၁၀ ရက်ပြည့်တာနဲ့ $10 မဟုတ်ပဲ $100 ထိ ကုန်သွားတတ်တယ်။ အဓိက ကတော့ ကိုယ်လုပ်ချင်တဲ့ရက်၊ ကိုယ်သုံးချင်တဲ့ငွေအမောက်ကို သေခြာလေးစစ်တတ်ရင်တော့ ဒီလို ကိုယ်မသိလိုက်ပဲ ကုန်သွားတာမျိုးတွေမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့။
ကဲ... ဒီလောက်ဆိုရင် Boost လုပ်ရင်း မလိုအပ်ပဲအပိုကုန်တာမျိုးတွေမဖြစ်ရအောင် ဘာတွေဘယ်လိုစစ်ရမယ်၊ ဘာတွေ ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာ သိသွားကြမယ်ထင်ပါတယ်။
Aung Kyaw Soe ( 28.11.2019 - 1:10 PM )
မူရင်း Account Post -
မူရင်း Page Post -
Report an Imposter Account ဆိုတာ Facebook မသုံးတဲ့သူတွေနဲ့ အရေးကြီး Person တွေရဲ့ Fake Account ( အကောင့်အတု )တွေပေါ်လာခဲ့ရင် Report လုပ်လို့ရအောင် ရည်ရွယ်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ Account Hack or ခိုးယူခံရပြီး ပြန်မရနိုင်တော့တဲ့သူတွေအတွက်လည်း Account ကိုဖျက်ပစ်ဖို့ အတွက်အသုံးတည့်ပါတယ်။
ဘယ်လိုအရာတွေအတွက် ဒီ Report tool ကိုအသုံးပြုနိုင်လဲ?
1. Someone is using my email address on their account.
( တစုံတယောက်က မိမိရဲ့ Email ကိုသုံးပြီးအကောင့်ဖွင့်ထားတယ်။ )
2. Someone created an account for my business or organization.
( တစုံတယောက်က မိမိရဲ့စီးပွားရေး သို့မဟုတ် မိမိတို့အဖွဲ့အစည်းပုံစံမျိုးနဲ့ အကောင့်ဖွင့်ထားတယ်။ )
3. Someone created an account pretending to be me orafriend.
( တစုံတယောက်က မိမိ သို့မဟုတ် မိမိသူငယ်ချင်းပုံစံနဲ့အကောင့်ဖွင့်ထားတယ်။ )
အထက်ပါအကြောင်းရာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဒီ Report an Imposter Account နေရာလေးကနေ Report ပြုလုပ်လို့ရပါတယ်။
● လက်ရှိအသုံးပြု​နေ​သော Facebook account တစ်ခုရဲ့ Email ကို ဝင်လို့ရရမည်။
(Facebook account မဖွင့်ထား​သော Email ကို သုံးလို့မရပါ။)
● Report ပြုလုပ်ပြီး ဖျက်ပစ်မည့် Account အကောင့်မူရင်းပိုင်ရှင်၏ ID ပုံ နှစ်ပုံ။
(ID ဆိုတာ Passport / ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် / မှတ်ပုံတင်တွေကို ပြောတာပါ။)
● Account အတု / ဖျက်ချင်တဲ့ Account ရဲ့ Profile Link.
ကဲ... အခု Hack ခံထားရတဲ့အကောင့်တခုနဲ့စလုပ်ပြပေးပါ့မယ်။ Report စတင်ပြုလုပ်ဖို့အတွက် အောက်ပါ Link လေးကိုဝင်လိုက်ပါ။
ကွန်ပြူတာ( Laptop, Desktop ) နဲ့ပြုလုပ်နည်း။
( ပုံ - ၁ )
ပုံ( 1 )ယခုလိုတွေ့ရပါက Someone created an account pretending to be me orafriend ကိုရွေးချယ်ပါ။
( ပုံ - ၂ )
ပုံ (2) အခုလိုတွေ့ရင် No ကိုထပ်ရွေးပါ။
( ပုံ - ၃ )
ပုံ (3) အခုလိုတွေ့ရပြီဆိုရင် Yes, I am the person being impersonated ကိုထပ်ရွေးပါ။
( ပုံ - ၄ )
ပုံ (4) အခုပုံထဲမှာ ဘယ်နေရာမှာ ဘာဖြည့်ရမယ်ပြောပေးထားတာပါ။
( ပုံ - ၅ )
ပုံ (5) ဒါကတော့ နမူနာဖြည့်သွင်းပြထားတဲ့ပုံပဲဖြစ်ပါတယ်။
အထက်ပါအတိုင်းဖြည့်ပြီးပါက Send ကို နှိပ်ပေးလိုက်လို့ရပါပြီ။
အခုလို Report လုပ်လိုက်ပြီး အောက်ပါအတိုင်း Email ဝင်ပါတယ်။
Go to your Support Inbox
သို့မဟုတ် Support inbox ထဲကိုသွားပြီးဝင်ကြည့်လိုက်ပါ။
Support inbox ထဲကိုဝင်ကြည့်လိုက်လို့ Open ဆိုပြီးပြနေရင် စောင့်ကြည့်ဖို့လိုပါမယ်။
နောက်ဆုံး Facebook ဘက်ကနေ အဲ့ဒီအကောင့်ကို Remove လုပ်လိုက်ပြီဆိုရင် အောက်ပါအတိုင်း Support inbox ထဲမှာ Close ဆိုပြီးပြပေးပါတယ်။
အပေါ်ကပုံထဲကလို ပြနေပြီဆိုရင်တော့ ကိုယ် Report လုပ်ပြီးဖျက်ချင်ခဲ့တဲ့အကောင့်ကို ဝင်ကြည့်လိုက်ပါ ပျက်သွားပါပြီ။
ဒီနေရာမှာ မဟုတ်ပဲ လိမ်ညာပြီးပို့လို့ရလားလို့ မေးလာခဲ့ရင်တော့ မရပါဘူး လို့ပဲဖြေချင်ပါတယ်။ Report လုပ်တဲ့သူအကောင့်ရယ်၊ Report လုပ်ခံရသူအကောင့်ရယ်ကိုဝင်စစ်သလို ID အစစ်အမှန်နဲ့တင်တာ ဟုတ်/မဟုတ် ကိုလည်း စစ်ဆေးပြီး အမှန်တယ်အစစ်အမှန်လို့ယူဆမှသာ အဲ့ဒီအကောင့်ကို ဖျက်ချပေးပါတယ်။
ID ကရောဘာတွေနဲ့တင်ရမှာလည်းဆိုရင် Facebook က ဘယ်လို ID အမျိုးအစားတွေကို Accept လုပ်သလဲ? မှာ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလို့ရပါတယ်။
Mobile( Facebook app, Mobile Browser ) နဲ့ပြုလုပ်နည်း။
ဒါကတော့ သဇင်ကိုကိုရေးထားတာလေးကို Edit အနည်းငယ်လုပ်ထားတာလေးပါ။ အပေါ်က ဟာနဲ့ အခုအောက်ဟာနဲ့ကတော့ ပြုလုပ်နည်းကအတူတူပါပဲ Mobile view နဲ့ Desktop view သာ အမြင်မှာ အနည်းငယ်ကွာသွားတာကြောင့်ပါ။
- Someone has created an account pretending to be me orafriend
- Yes, I am the person being impersonated
Your full name မှာ မူလ Account ပိုင်ရှင်ရဲ့ နာမည်အရင်းကို ရေးပါ။
Your contact email address မှာ လက်ရှိအသုံးပြု​နေတဲ့ fb account ထဲက gmail ကို ​ရေးပါ။
Full name on the impostor profile မှာ account အတု / ဖျက်ချင်တဲ့ account ရဲ့ နာမည်ကိုရေးပါ။
Email address or mobile phone number နေရာမှာ ဘာမှဖြည့်ဖို့မလိုပါဘူး။
Link (URL) to the impostor profile မှာ account အတု / ဖျက်ချင်တဲ့ account ရဲ့ link ကိုထည့်ပါ။
(Account link ကို သိဖို့က အဲဒီ account ရဲ့ wall ထဲကိုဝင်၊ More ... အစက် ၃ စက်ကို နှိပ်ပြီး Copy link to profile ကို နှိပ်ပါ)
Upload an ID | Choose Files မှာ account ပိုင်ရှင်ရဲ့ ID ပုံ နှစ်ပုံကို ထည့်ပေးပါ။
နှစ်ပုံရွေးလို့မရရင် တစ်ပုံပဲ ထည့်လိုက်ပါ။
ကတ်နဲ့ လူမျက်နှာနဲ့တွဲလျက် -
Report an Imposter အတွက် Fb team က စစ်ဆေးမယ့်သူတွေက နိုင်ငံခြားသားတွေဖြစ်တာကြောင့် ပုံတွေကို passport / ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် (ခ) နဲ့ရိုက်ပေးပါ။ အဲဒါတွေမရှိမှပဲ မှတ်ပုံတင်နဲ့ ရိုက်ပါ။
Additional info မှာ "Please remove this account from Facebook." လို့ပဲ ရေးလိုက်ပါ။
အပေါ်ကအချက်တွေ အားလုံးဖြည့်ပြီးရင် Send ကို နှိပ်ပါ။
(ပုံထဲမှဖြည့်ထားသောအချက်အလက်များသည် နမူနာထည့်ထားခြင်းသာ ဖြစ်သည်။)
Send ပြီးလို့ ၅ မိနစ်လောက်ကြာရင် Your contact email မှာဖြည့်ခဲ့တဲ့ Gmail ထဲကို Fb team က mail ပို့ပေးပါလိမ့်မယ်။
Re: Report an Imposter Account ခေါင်းစဉ်နဲ့ လာပါတယ်။
အဲဒီစာကိုဖွင့်ပြီးတော့ account ကို ဖျက်ချင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကို English လို နည်းနည်းပါးပါးရေး၊ ID နှစ်ပုံကို attactment ထည့်ပြီးတော့ Reply ပြန်ပို့လိုက်ပါ။
Account ပျက်မပျက်အကြောင်းကြားစာကို တစ်ရက်နှစ်ရက်အတွင်း Fb team က mail ထပ်ပို့ပေးပါလိမ့်မယ်။
အရင်တုန်းက Facebook account လေးဘာဖြစ်လို့၊ Facebook page လေးဘာဖြစ်လို့၊ ဆိုပြီးလာပြောတိုင်း ဘာဖြစ်လည်းဆိုတာ Check လုပ်ပြီး ဒါက ဘယ်လို Policy မျိုးကိုချိုးဖောက်မိလို့ဖြစ်တာဆိုပြီးပြောပြတိုင်း အဲ့လိုမဖြစ်အောင် နောက်ရှောင်လို့ရအောင် Facebook policy တွေကိုဘယ်မှာဖတ်ရမလဲဆိုပြီးမေးကြတယ်။
မေးတိုင်း fb.com/policies?helper=www.facebook.com/aungkyawsoe.sb လေးကိုညွှန်ပေးဖြစ်တယ်။
အဲ့ဒီမှာအကုန်ရှိပါတယ်။ ဝင်ဖတ်ကြည့်ပါလို့ပြောတိုင်း ဘာပြန်ပြောလာကြလည်းဆိုတော့ English လိုတွေကများတယ်။ မြန်မာလိုတွေက သိပ်မရှိသေးဘူး။ မြန်မာလို အနည်းအကျဉ်းရှိတဲ့ဟာတွေကလည်း Font အဆင်မပြေလို့ဖတ်မရဘူးဆိုပြီးပြောလာကြတယ်။ ဘယ်အဆင်ပြေမတုန်း Zawgyi font ပဲသုံးကြတာများတော့ ဖတ်မရဖြစ်တာပေါ့။ 😁
ကဲ... အခုဆို အားလုံး Unicode လည်းပြောင်းသုံးနေကြပြီ။ Policy တွေကို မြန်မာလိုရေးပေးထားတာလည်း အတော်လေးပြည့်စုံနေပြီ။ ဒီတော့ စာဖတ်မပျင်းကြဖို့ပဲလိုတော့တယ်။ 😁😁😁
ဝင်ဖတ်တော့ English လိုဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်...?
Language မှာ Myanmar ဘာသာစကားကိုပြောင်းလဲပြီးမှဝင်ဖတ်ပါ။
ဖုန်း or ကွန်ပြူတာ ထဲက Browser ကိုဖွင့်ပြီး Fb.com လို့ရိုက်ထည့်ပြီးဖွင့်ပါ။ Facebook login page နေရာမှာ မြန်မာလိုပေါ်လာရင် အဆင်ပြေပါတယ်။ မြန်မာလိုမဟုတ်ပဲ English လိုဖြစ်နေရင် ဘာသာစကားမှာ Myanamr ဘာသာကိုရွေးချယ်ပေးဖို့လိုပါတယ်။
ပြီးရင် ဒီ Link fb.com/policies?helper=www.facebook.com/aungkyawsoe.sb ကို address bar ထဲမှာ ထည့်ဖွင့်ပြီး အကုန် မြန်မာလိုဝင်ဖတ်လို့ရပါပြီ။ Facebook account ကို login ဝင်ဖို့မလိုပဲ ဖတ်ရှုလို့ရပါတယ်။ 😊😊😊
Aung Kyaw Soe ( 21.9.2019 - 10:27 AM )